त्रिवि केन्द्रीय विभागको ट्वाइलेट कथा – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
हामीसँगै हिँडिरहेका समाजका अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद लामिछाने भन्दै थिए, ‘यो बगैँचा एकदमै फोहोर थियो, पोहोर हामीले सफाइ गरेर केही धूपी रोपेका थियौं। तुलनात्मक रूपमा अहिले अलि सफा छ।’
नकाटेको निकै भएकाले बर्खे घाँस लहलहाएर आएका छन्। हलक्क बढेका घाँस थपक्क मान्छे बस्ने बेन्चहरूमा आराम गरिरहेका छन्। ती बेन्च घाँसले छोपिएकाले मान्छे बस्ने अवस्था छैन। बगैँचा घाँसको बगैँचाजस्तो भएको छ। ‘विश्वविद्यालयसँग प्रश्स्तै कर्मचारी छन्,’ लामिछाने भन्दै थिए, ‘ठीकसँग परिचालन गर्ने हो भने चौर र बगैँचामा यसरी घाँस बढ्ने अवसर त्यति पाउने थिएन।’
लामो समयदेखि विभागमा पढाइरहेका जनक राई यहाँका ‘एसोसिएट’ प्रोफेसर हुन्। अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी मिचिगन’ बाट पिएचडी गरेर केही वर्षअघि मात्रै उनी त्रिवि फर्किएका हुन्।
राई भन्छन्, ‘मानवशास्त्र मात्रै होइन, अरू कतिपय विभागको अवस्था यस्तै छ।’
‘त्यहाँको कुरै नगरौं,’ श्यामुले भनिन्, ‘हामी विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने शौचालय नै चार प्रकारको थियो। ‘एसियन’देखि युरोपेली अत्याधुनिक स्तरका। ती शौचालयमा कहिल्यै दुर्गन्ध आएको मलाई थाहा छैन।’
हामी कुरा गर्दै अर्को कोठातिर अघि बढ्यौं। उनी भन्दै थिइन्, ‘शौचालय भनेको संस्कृति र सभ्यताको पनि कुरा रहेछ।’
हामी गइरहेको कोठाको ढोकामा ‘विभागीय प्रमुख लयप्रसाद उप्रेती’ को नेमप्लेट टाँगिएको थियो। प्रमुख उप्रेती भने कार्यकक्षमा थिएनन्।
‘उहाँको कक्षा छैन, त्यसैले सधैं आउनुहुन्न,’ उनले सुनाइन्।
‘विभागमा शिक्षक/शिक्षिका कति जना हुनुहुन्छु?’ मैले सोधेँ।
‘१६ जना’ उनले जवाफ दिइन्। उनी यो विभागकी एक्ली शिक्षिका रहिछन्।
‘१६ जना? अनि तपाईंहरू कहाँ बस्नुहुन्छ?’
‘यहीँ बस्छौं,’ उनले जवाफ दिइन्।
‘एडजस्ट गरेर,’ उनी मुसुक्क हाँसिन्। अनि थपिन्, ‘हामी बैठक गर्नुपर्‍यो भने लाइब्रेरीमा गर्छौं।’
‘किताबहरू पर्याप्त त छैन तर धेरै नै छन्,’ उनले भनिन्।
‘पढाउने पाठको तयारी गर्नुपर्‍यो भने कहाँ बसेर गर्ने?’ शिक्षक राई भन्छन्, ‘एउटा कोठामा विभागीय प्रमुखदेखि सबै शिक्षक बस्नु पर्छ।’ यसले घरमै तयारी गरेर आउनुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ। विश्वविद्यालय गएर विभागमै बसेर हेरौं न त भन्ने सुविधा उनीहरूलाई छैन।
श्यामु भन्छिन्, ‘सेमेस्टरमा गएपछि विद्यार्थीहरूसँग बढी नै छलफल गर्नुपर्छ। तर बोलाएर पर्सनल काउन्सिलिङ गर्ने ठाउँ छैन। कहिले बाहिर उभिएर कुरा गर्छु, कहिले बाटोमा हिँड्दै कुरा गर्छु। कहिलेकाँही रेस्टुरेन्टमा बसेर कुरा गर्छु। विभागमा यस्तो ‘स्पेस’ नै छैन।’
‘अरू त के कुरा गर्नु, विभागमा शौचालयसमेत छैन,’ उनले भनिन्, ‘कि त समाजशास्त्र विभाग कि त राजनीतिशास्त्र विभागमा शौचालयको चाबी माग्न जानुपर्छ। त्यहाँ पनि पानीको राम्रो व्यवस्था छैन।’
त्यसैले शिक्षकहरूबीच मार्मिक ठट्टा पनि चल्दो रहेछ कहिलेकाहीँ, ‘डाइरिया भयो भने युनिभर्सिटी आउनुपर्दैन। पढाउनु पर्दैन।’
गत वर्ष उनीहरूले एक जना फ्रेन्च प्रोफेसरलाई ‘गेस्ट लेक्चर’का लागि बोलाएका थिए। उनले कक्षा सकिएपछि सोधिन्, ‘ट्वाइलेट कता छ?’
उनी गइन्। त्यो शौचालयमा ‘डस्टबिन’ थिएन। महिनावारी हुँदा लगाएको ‘प्याड’ फाल्ने ठाउँ उनले पाइनन्। उनले आफैंसँग भएको प्लास्टिकमा पोको पारिन् र घर लिएर गइन्।
‘हामी नियमित सेमिनारहरु चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गेष्ट लेक्चरहरू बोलाइरहेका छौं। बाहिरका राम्रा एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू आउँछन् तर शौचालय नहुँदा लाजमर्नु हुन्छ। कहाँ लैजाने हुन्छ।’
शिक्षक थापा पुरूषकै लागि शौचालय नभएको बेला ‘जेन्डरफ्रेन्ड्ली’ शौचालयको कुरै गर्न नसकिने बताउँछिन्।
‘जेन्डर फ्रेन्ड्लीको त के कुरा गर्नु र?’ उनले भनिन्, ‘यहाँ पुरूषकै लागि शौचालय छैन।’
‘घडी भवनमा शौचालय त छन् तर तीन मिटर परैबाट दुर्गन्ध आउँछ, प्रयोग गर्नै सकिँदैन,’ श्यामुले बताइन्।
‘अनि कसरी जाने, एउटा बार वा केही छेक्नेसम्म राखेर नदेखिने पनि बनाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो छात्रा त्यहाँ जाँदैनन्, अरू विकल्प खोज्नुपर्छ।’
शिक्षक राईलाई एक जना विद्यार्थीले त्यहाँबाट पास गरेर गइसकेपछि त्रिवि पढ्दाको गुनासो सुनाएकी रहिछन्, ‘हामी महिनामा चार दिन क्लास नै जाँदैन थियौं। प्याड फाल्ने र पानीको सुविधा भएको ट्वाइलेट भए हामीले क्लास छुटाउनुपर्ने थिएन।’
‘जेन्डर स्टडी, इक्वालिटी, इम्पवारमेन्टका कुरा त कक्षामै सीमित भए,’ श्यामुले भनिन्, ‘यी कुरा त्रिविका ट्वालेटसम्म कहिले पुग्ने हुन् खै!’
‘आर्थिक अभावले होइन,’ शिक्षिका श्यामुले भनिन्, ‘इच्छाशक्ति हुने हो भने जताबाट स्रोत जुटाएर पनि गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो।’
‘हामीले पढाउने कि ट्वाइलेटका कुरा दिनदिनै गरेर बस्ने?’ शिक्षक राईले भने, ‘एकपटक भनेपछि विश्वविद्यालयले हल गर्न पर्‍यो नि। एकेडेमिक काम गर्ने मान्छेले सधैं ट्वाइलेटका कुरा गरेर बस्नु?’
‘मुख्य त विभागीय प्रमुखले पहल गर्नुपर्ने हो,’ श्यामु भन्छिन्, ‘उहाँहरूले पहल गरे बल्ल केन्द्रीय क्याम्पस वा त्रिविले सहयोग गर्छ। उहाँहरूको पहल नै पुगेन।’
शिक्षक राईचाहिँ यसमा त्रिविको सम्पूर्ण संरचना नै दोषी रहेको बताउँछन्। ‘विभागीय प्रमुख पनि एकेडेमिक मान्छे हो,’ उनले भने, ‘शौचालय बनाइदेऊ भन्दै त्रिविका कर्मचारीलाई कतिपटक भन्न जाने? यो त ह्यारेसमेन्ट हुन्छ। यसकै लागि पटकपटक भिसी वा रेक्टर, रजिस्टार भेटिरहने कुरा पनि भएन।’
राईको दुखेसो छ, ‘त्रिविमा केही गरौं भन्ने नेतृत्व नै छैन, सबै भागबण्डाबाट आएका छन्। उनीहरू पार्टीप्रति वफादार छन्, आफ्नो पार्टीका भ्रातृसंगठनप्रति वफादार छन् तर प्राध्यापक वा शिक्षकहरूप्रति कहिल्यै जवाफदेही भएनन्। त्रिविको दुर्भाग्य यही हो।’
‘त्रिविको केन्द्रीय विभाग भनेपछि मान्छेहरूले कस्तो सोचिरहेको हुन्छ,’ राईले भने, ‘यहाँको हालत यस्तो छ। मानवशास्त्र विभागको कथाले त्रिविका केन्द्रीय विभागहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने झल्काउँछ।’